I just wanna save you!!Please have mercy on me!!! - Part 19 - Wattpad
903 152 10
*Golden Egg ခေါ် ရွှေဥ,ဥတမ်း* ဟူသည်မှာ ပိုင်ချင်းယွီတို့မြို့ငယ်လေးတွင် ယခင်ကတည်းကကလေးအများစုဆော့ကြသောဘောလုံးဖြင့်ကစားရသော ကစားနည်းလေးတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
ပိုင်ချင်းယွီတို့သင်ကြားတက်ရောက်နေသည့် ကျောင်းဝန်းထဲတွင် ကလေးများဆော့လေ့ရှိသောကစားကွင်း၌ ထုံးဖြူးထားသောလိုင်းများပါရှိ​သည့်စတုဂံတစ်ခုကရှိပြီးသားဖြစ်၍ထိုအတွက်ပူရန်မလိုပေ။ဘောလုံးတစ်လုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်ရသည့် ဂိမ်းဖြစ်ပြီးကလေးများဆော့ကစားရန်သာဖြစ်သည့်အတွက် ကလေးများကိုင်သည့်ပေါ့ပါးသည့်ဘောလုံးငယ်သာဖြစ်ရမည်။
မြေပြင်ပေါ်မှစတုဂံ၏အလျားတစ်ဘက်တစ်ချက်တွင်ရပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုမျဥ်းနှစ်ခုကိုစည်းဟုခေါ်ဆိုကြသည်။လိုင်းတစ်ဘက်တွင်ရပ်နေသော အသင်း Aမှပထမကစားသမားသည် အလယ်ရှိ ခံစစ်အသင်းBအားထိမှန်အောင်ပစ်ရမည်ဖြစ်ပြီး မမှန်ခဲ့ပါက ဒီဘက်ထိပ်မှဒုတိယကစားသမားက အလယ်မှBအသင်းသားကို
ခံစစ်မှအသင်းBကစားများသည် တစ်ဦးထဲဖစ်စေ နှစ်ဦးလုံးပင်ဖြစ်စေ စည်းအတွင်းတွင်နေကာ
အသင်းAမှပစ်သောဘောလုံးကိုမထိအောင်ရှောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ခံစစ်အသင်းB၏အားသာချက်မှာ စည်းအပြင်မထွက်သရွေ့ မိမိကြိုက်သည့်တည်နေရာကိုပြောင်း၍ နေနိုင်သည်။သို့မှသာ ဘောလုံးထိမမှန်မှာဖြစ်မည်။
ထို့အပြင်ဘောလုံးကိုရှောင်နိုင်ရုံအပြင်နောက်ထပ်ပြုလုပ်နိုင်သော chanceတစ်ခုလည်းရှိသည်။အသင်းAမှပစ်လိုက်သော ဘောလုံးအားလက်နှစ်ဘက်ဖြင့် မိအောင်ဖမ်းရမည်ဖြစ်သည်။
မည်ကို ရွှေဥ ဟုခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။